Mwanakomana akachenjera anofadza baba vake (1)
Maoko anoshanda nesimba anounza upfumi (4)
Kutaura mashoko akawanda kunokonzera kukanganisa (19)
Chikomborero chaJehovha chinopfumisa (22)
Kutya Jehovha kunorebesa upenyu (27)
10 Zvirevo zvaSoromoni.+ Mwanakomana akachenjera anofadza baba vake,+Asi mwanakomana benzi anoshungurudza amai vake. 2 Pfuma inowanikwa nenzira dzakaipa haizobatsiri,Asi kururama ndiko kunonunura parufu.+ 3 Jehovha haazoiti kuti munhu akarurama anzwe* nzara,+Asi achanyima vakaipa zvavanopanga. 4 Kugarira maoko kunokonzera urombo,+Asi maoko anoshanda nesimba anounza upfumi.+ 5 Mwanakomana ane njere anounganidza zvirimwa muzhizha,Asi mwanakomana anoita zvinonyadzisa anenge akafa nehope munguva yekukohwa.+ 6 Makomborero ari pamusoro wemunhu akarurama,+Asi muromo wemunhu akaipa unovanza kuda kwaanoita mhirizhonga. 7 Kuyeukwa kwemunhu akarurama kunounza* chikomborero,+Asi zita remunhu akaipa richaora.+ 8 Munhu ane mwoyo wakachenjera achabvuma kudzidziswa,*+Asi munhu anotaura zveupenzi achatsikwa-tsikwa.+ 9 Munhu anofamba akaperera achafamba akachengeteka,+Asi munhu ane nzira dzisina kururama achazivikanwa kuti ndizvo zvaari.+ 10 Munhu anochonya neziso rake achinyengera anorwadzisa,+Uye munhu anotaura zveupenzi achatsikwa-tsikwa.+ 11 Muromo wemunhu akarurama itsime reupenyu,+Asi muromo wemunhu akaipa unovanza kuda kwaanoita mhirizhonga.+ 12 Ruvengo ndirwo runomutsa kukakavadzana,Asi rudo runofukidza kudarika kwese.+ 13 Uchenjeri hunowanikwa pamiromo yemunhu anonzwisisa,+Asi shamhu ndeyemusana wemunhu asina pfungwa.*+ 14 Vaya vakachenjera vanochengeta ruzivo,+Asi muromo webenzi unotsvaga kuparadzwa.+ 15 Pfuma yemupfumi yakaita seguta rake rakakomberedzwa nemasvingo. Varombo vanoparadzwa neurombo hwavo.+ 16 Basa remunhu akarurama rinotungamirira kuupenyu;Asi zvibereko zvemunhu akaipa zvinotungamirira kuchivi.+ 17 Munhu anoteerera achirayirwa* inzira inoenda kuupenyu,*Asi uya anoramba kutsiurwa anoita kuti vamwe varasike. 18 Munhu anovanza ruvengo rwake anotaura nhema,+Uye munhu ari kuparadzira makuhwa* ibenzi. 19 Kana mashoko akawanda, kukanganisa hakushayikwi,+Asi munhu wese anobata muromo wake akangwara.+ 20 Rurimi rwemunhu akarurama rwakaita sesirivha yakanakisisa,+Asi mwoyo wemunhu akaipa hauna ukoshi. 21 Muromo wemunhu akarurama unozorodza* vakawanda,+Asi mapenzi anofa nekushayiwa njere.+ 22 Kukomborera kwaJehovha ndiko kunoita kuti munhu apfume,+Uye haaiti kuti kuuye nemarwadzo.* 23 Kuita zvinhu zvinonyadzisa kwakafanana nemutambo kubenzi,Asi uchenjeri ndehwemunhu ane ungwaru.+ 24 Zvinotyiwa nemunhu akaipa zvichauya paari;Asi vakarurama vachagutswa zvido zvavo.+ 25 Dutu parinopfuura, munhu akaipa achange asisipo,+Asi munhu akarurama akaita sefaundesheni inogara nekusingaperi.+ 26 Sezvinoita vhiniga pamazino uye utsi mumaziso,Ndizvo zvinoita simbe kumunhu anenge aituma.* 27 Kutya Jehovha kunorebesa upenyu,+Asi makore evakaipa achatapudzwa.+ 28 Zvinotarisirwa nevakarurama zvinoita* kuti vafare,+Asi tariro yevakaipa ichaparara.+ 29 Nzira yaJehovha inhare* kumunhu asina chaanopomerwa,+Asi inoreva kuparadzwa kuvanhu vanoita zvakaipa.+ 30 Munhu akarurama haazombowisirwi pasi,+Asi vakaipa havazorambi vachigara panyika.+ 31 Muromo wemunhu akarurama unobudisa uchenjeri,*Asi rurimi rwakatsauka ruchadimburwa. 32 Muromo wemunhu akarurama unoziva zvinofadza,Asi miromo yevakaipa yakatsauka.
^ Kana kuti “mweya wemunhu akarurama unzwe.”
^ Kana kuti “Mukurumbira wemunhu akarurama unounza.”
^ ChiHeb., “mirayiro.”
^ Kana kuti “achirangwa.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “ari munzira inoenda kuupenyu.”
^ Kana kuti “runyerekupe.”
^ Kana kuti “unotungamirira.”
^ Kana kuti “nekusuwa; nematambudziko.”
^ Kana kuti “kuna tenzi wayo.”
^ Kana kuti “Tariro yevakarurama inoita.”
^ Kana kuti “unobereka chibereko cheuchenjeri.”